ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: စိတ်ကူးပါ . ပြီးရင် . . ဆက်လုပ်ပါ.
ရေးသားသူ may16 at Thursday, July 22, 2010
နေ၀သန် July 22, 2010 at 4:48 PM
မှန်တာပေါ့ဗျာ...။ စိတ်ကူးကို ကောင်းကောင်းကူး.. ပြီးရင် တခါတည်းအကောင်အထည်ဖော်... ။း၀၀၀)
ကိုကိုမောင် (ပန်းရနံ့) July 22, 2010 at 6:21 PM
စိတ်ကူးကို အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ကြရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။
Junction Point July 23, 2010 at 12:11 AM
ကိုယ်တကယ်လုပ်မယ်ဆိုပြိး စိတ်ထဲက ပိုင်းဖြတ်ထားရင်တော့ ဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲကောင်းတယ်
မလုပ်နိုင်ရင်တော့ အစကတည်းက မလုပ်နဲ့
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) July 23, 2010 at 1:03 AM
စိတ်ကူးရှိမှ လက်တွေ့လုပ်လို့ရမှာလေ နော်..
ကြိုတင်ကြံစည်မှုမရှိဘဲ ထလုပ်တဲ့ အလုပ်က အောင်မြင်ဖို့ နည်းပါတယ်..
ညခင်း July 23, 2010 at 10:21 AM
အမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပိုစ့်လေးပါ။ ပညာများဖြန့်ဝေပေးတာ ကုသိုလ်ရပါတယ်။
zinber October 7, 2010 at 12:02 PM